Rwendo rweParis, chii chaunoona muguta | Kufamba Nhau
Rwendo rweParis, chii chekuona muguta
Susana Garcia | | Cities, Paris, Chii chekuona, famba
La guta rerudo, parisIyo inzvimbo iyo munhu wese anorota yekushanyira kamwe chete muhupenyu hwavo. Nzvimbo izere nenhoroondo, uye ine mamuseum, zvivakwa, mapaki nenzvimbo dzisingafanirwe kushaikwa chero zvodii. Sedzimwe rwendo, tinofanirwa kuzvirongedza uye tigoita rondedzero yezvinhu zvese zvakakosha kuti tione.
Mune ino post isu tichataura nezveavo zvinhu hapana munhu anofanirwa kupotsa kana iwe ukaenda kuParis, uye iguta rine zvakawanda zvekupa, saka imwe vhiki yevhiki ingangouya chete kuzoona dzakanyanya kukosha nzvimbo. Kana apa ndipo paunotevera kuenda, cherekedza chakakosha.
1 Kugadzirira rwendo
2 Eiffel Shongwe
4 Arch yekukunda
6 Kumwe kushanya kunonakidza
Chimwe chezvinhu chatinofanira kufunga nezvacho tisati taenda chero kupi mafambiro atichaita. Kubva kunhandare dzendege unogona kutora mabhazi kana matekisi. Kufamba-famba neguta rinomhanya kwazvo hapana mubvunzo kuti ndiyo nzira yepasi pevhu, uye chatinofanira kuwana ndiyo Kadhi yeParis Visite, inova ndiyo yakanakisa pekugara kwenguva pfupi uko zvinoshandiswa neruzhinji kutakura. Iyo Passe Navigo ndiyo inoshandiswa nevaParis, saka zvinokurudzirwa kungogara kwenguva refu.
Kunyangwe mushure mekuvakwa kwayo kwechiratidziro chepasi rose chaifungidzirwa kuchikoromora, iyo Eiffel Tower nhasi ndiyo chiratidzo cheParis. Iyo yaishandiswa senge antenna panguva yehondo uye nhasi inogamuchira vanopfuura mamirioni manomwe evashanyi. Kumwe kwekushanyirwa kwekushanya kune ino shongwe, iyo yaunofanirwa kukwira kuti unakirwe nemaonero eguta. Kunyanya zvakajairika kukwira mulifiti, kunyangwe ichigona kuitwa nematanho. Nekudaro, pane matanho anodarika chiuru nemazana matanhatu, saka tinofanirwa kunge tiri muchimiro chakanaka. Kuti uwane chikamu chekupedzisira cheshongwe, kushandisa erevheta kunosungirwa. Zano rakanaka nderekutora matikiti ako pachine nguva kuti udzivise mitsara mirefu.
Imwe yei chekare chegothic machechi munyika, yakavakwa pakati pezana ramakore rechi14 nerechi30 uye kushanya uko kuri zvirokwazvo kunofanira kana uchisvika muParis. Chatinofanira kuziva ndechekuti kune nzendo dzinotungamirirwa muSpanish Mugovera wega wega naXNUMX: XNUMX masikati, saka tinogona kuyedza kusangana chiitiko ichi nekudaro tizive zvishoma nezve iyi Gothic cathedral. Iwe unogona zvakare kukwira shongwe kuti uve neimwe inoshamisa maonero eguta.
Ichi ndicho chimwe chezvivakwa zvinomiririra zveParis pamwe nezvakamboitika. Kana tasvika tichaona kuti yakafanana nechitenderera chakakura umo mazana emota anodarika. Nemamita makumi mashanu pakureba, kuvakwa kwayo kwakarairwa naNapoleon mushure mekupedza kurwa kweAusterlitz. Pazasi pane Tomb reSauto Isingazivikanwe, ine murazvo unopisira avo vese mauto eFrance akafira muhondo uye vasina kumbozivikanwa. Iwe unokwanisa kupinda mukati maro kuti unakirwe nemaonero kubva kumusoro, uye kusvika ipapo zvakanakisa kushandisa nzira dzepasi, nekuti kutenderera kune ngozi zvakanyanya kune vanopfuura.
Uku ndiko kumwe kwekushanya kwakakosha muParis, kunyanya kana iwe uri mafeni eunyanzvi. Yakavhurwa muzana ramakore rechiXNUMX uye kubvira ipapo haina kumira kushanyirwa, kuve imwe yevakakurumbira pasi rose. Muna 1989 ndipo pakavakwa piramidhi hombe yegirazi, inova nhasi ndiyo mufananidzo wayo, uye unoipa chitarisiko chemazuva ano, uye parizvino mukova wemu museum. Mamwe emabasa ake akakosha kupenda kweMona Lisa naLeonardo da Vinci kana iyo yeRusununguko ichitungamira vanhu naDelacroix, uye muzvivezwa vane Venus de Milo yekuGirisi Yakare kana Mubati Wakagara weEkare Egypt.
Kumwe kushanya kunonakidza
Shanyo dzakapfuura zvirokwazvo dzinofanirwa, asi kune dzimwe nzvimbo dzakawanda dzinogona kuve dzinonakidza kwazvo kana tiine nguva. Semuenzaniso iyo Nhengo yeParis, kubva muzana ramakore rechiXNUMX, iro rakafemerwa nekuvakwa kwechiGreek uye iro rine mukati rinoshamisira, nedome rayo hombe kana crypt ine guva revanhu vane mukurumbira saVoltaire kana Victor Hugo.
La Iyo Tsvene Yemoyo Basilica Iyo iri pamusoro peMontmartre, uye zvese nekuda kwemaonero uye nerunako rwechivakwa kwakakodzera kuenda kwazviri. Iwe unogona zvakare kukwira kune yayo yepamusoro chikamu kuti uone Paris, uye kuti usvike kuimba basilica zvakanakira kutora funicular ipapo, zvikasadaro isu tichafanirwa kukwira matanho mazhinji kusvika ikoko.
Uye isu hatigone kusiya kumashure kwe Muzinda weVersailles, iyo imba yekugara yeumambo, ine zvinoshamisa zvivakwa, zvemukati zvine runako uye mapindu akanaka. Haisi pakati peParis asi kushanya kwako kwakakosha, saka inofanira kuitwa pamberi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Cities » Rwendo rweParis, chii chekuona muguta
Tenga zvinyorwa uye vinyl muNew York